Filtrer les éléments par date : vendredi, 26 avril 2019
vendredi, 26 avril 2019 19:00
Toamasina: Fanaovan-tsonia "Toky nomena" nataon’ireo kandida depiote
Tontosa omaly tao amin'ny Lapan'ny faritra Atsinanana, ny fanaovana sonia ilay "Toky nomena" ataon'ireo kandida solombavambahoaka teto Toamasina, nokarakarain’ny CFM sy ny CENI ary ireo mpamatsy vola.
Miisa 12 ny kandida eto Toamasina I, ka ny telo no tsy nanao sonia izany, teo Atoa Rakotomalala Henri izay nilaza fa tsy hanao sonia satria efa nisy fanomezan-toky nataony tamin'ny fametrahana firotsahan-kofidiana nataony, teo Atoa Botozaza Pierrot izay nambara fa tsy eto an-toerana ankehitriny, ary Rtoa Naharimamy Irmah izay niatrika famoahana andiana mpampianatra tao amin'ny Miramar tamin'io fotoana io.
vendredi, 26 avril 2019 15:20
Vladivostok: Nihaona i Kim Jong-Un sy Vladmir Poutine
Tontosa omaly alakamisy 25 aprily tany Vladivostok, Russie ny fihaonan'ny filoha Korea avaratra sy ny filoha rosianina.
Samy nilaza ny fahafaham-pony ny roa tonta tamin'ny fihaonana. Ny Filoha Vladmir Poutine moa dia nanome toky amin'ny fiarovana ny Korea Avaratra raha miroso tanteraka amin'ny fialana amin'ny fitaovam-piadiana nokleary i Korea avaratra.
Tsiahivina moa fa nangatsiaka ny fifandraisan'i Kim Jong-Un tamin'i Donald Trump taorian'ny fihaonana nandamoaka tamin'ny volana febroary tany Hanoï Vietnam farany teo, ka izao mitady namana hanohana azy izao i Kim Jong-Un.
vendredi, 26 avril 2019 14:06
Faritra SAVA: Loabary an-dasy momba ny seha-pihariana lavanila
Nihaino nivantana ireo mpisehatra rehetra momba ny lalampihariana lavanila ny Praiminisitra Ntsay Christian, notronon'ireo Minisitra efatra ao amin'ny governemanta tarihiny.
Miteraka olana lehibe voalohany ny daty hisokafan’ny tsena amin'ity taom-piotazana ity. Mangataka ny mpandraharaha mba ho any amin'ny volana Agositra ; ireo mpamboly sy olom-boafidy eny ifotony kosa maniry ny hanokafana ny taom-piotazana amin’ny volana Jolay raha tara indrindra. Ny seha-pihariana lavanila rahateo no miteraka ny tsy fandriampahalemana aty amin'ny Faritra SAVA.
vendredi, 26 avril 2019 11:09
Azo atao avy hatrany ny fampandrosoana ny Faritra
Mampatsiahy kely fotsiny, foano ny décret convocation référendum
Efa nisy décret convocation des électeurs ho an'ilay référendum.
Rehefa namoaka ny heviny ny HCC, na avis, dia marina fa tsy voatery arahin'ny Filoham-pirenena ilay avis, satria tsy arrêt na décision, izay tsy azo ivalozana, fa fakana hevitra iny.
Nefa kosa tandremo fa ny filohan'ny Sénat ihany koa dia nangataka iny avis iny, ka raha tsy foana izany ilay décret nampiantso référendum dia toy ny mbola misy foana ilay référendum, ka afaka mitory ny mpifidy avy eo hoe tsy ara-dalana io référendum io, dia hivadika didy izy eo amin'ny HCC, vao zava-doza io, satria azo raisina ho fandikana Lalampanorenana ka ampiasaina ho empêchement any aoriana.
vendredi, 26 avril 2019 10:25
vendredi, 26 avril 2019 10:23